I-Pail ejikelezileyo, i-Pail esecaleni, iBhakethi lesikwere-i-SDPAC
UDai Dong Tien unebhongo ngokuba nguvulindlela kwiTekhnoloji-Uyilo-uLwabiwo lweshishini leplastiki
Changzhou SDPAC Co., Ltd.ise C5, HUTANG inzululwazi kunye neTeknoloji Industrial Park, Guangdian East Road, Changzhou City, kunye nommandla phantse 10000 m2.
Inkampani inotyalo-mali olupheleleyo lwezigidi ezingama-20 kunye nemali ebhalisiweyo yezigidi ezili-10. Ngaba yingcali ebandakanyekayo kuzo zonke iintlobo zoyilo oluphezulu lweeplastikhi kunye namashishini okuvelisa, ukusetyenziswa okukhethekileyo kwepilisi zeplastiki sisikhokelo senkampani yam, sineengcali ezingama-20 kolu shishino, isidanga sekholeji okanye ngaphezulu, ngoku esenza uphando lweshishini nophuhliso, imveliso, umgangatho, intengiso, ezemali kunye neminye imisebenzi.
Umbono wenkampani "kukuzama ukwakha uphawu lweplastiki oludumileyo kwihlabathi liphela" kwaye iyile inkqubo eyahlukileyo yenkcubeko
1. Kubathengi: ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo, ukuseka ukuthembana, uzinzo, ubambiswano lokuphumelela.
2. Kubaqeshwa: dala indawo yokusebenza ehambelanayo kunye neyokuphumelela, baqaphele, baqinisekise kwaye banike umdlalo opheleleyo kwixabiso elilodwa lomqeshwa ngamnye.
3. Kuluntu: bathobele imithetho nemimiselo yesizwe nemithetho yoshishino, nokuseka amashishini amatsha avelisa uhlaza, avelise izinto ezintsha kwaye anombulelo.
Bhrawuza ngu: Zonke
1.3 I-PAIL YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA ENESICWANGCISO
I-3.5G I-PAIL YOKUQHUBA IMOTO YOKUGQIBELA
I-5GAL IBHOLA LEBHOLA LE-LID
I-3.5GAL IBHOLA YEBHAYIBHILE ENESICWANGCISO
3.3I-PAIL YASIKRALA EGALAYO ESINESICELO
I-Chen Hsong Group JM MK6 isizukulwana esitsha sokugcina umbane usebenzisa izixhobo zokuvelisa kunye nezixhobo zokuvelisa, kunye neeseti ezili-120t, 260t, 320t, 650T, njl. , Umatshini wamanzi e-ice, umatshini wokufunxa, isomisi, njl., Ukuqinisekisa uzinzo kwimveliso.
Sinokunceda abathengi bayile kwaye bavelise zonke iintlobo zokupakisha iimveliso zeplastiki ezinxulumene nokusetyenziswa kwazo. Ukusuka kuyilo lwembono, uyilo lwemveliso, ukuyila ukuyila, ukuqhubekeka kwemveliso, njl